Fantaro ny haavon'ny fandotoana amin'ny rivotra amin'ny Plume Air Report | Androidsis
Ny fandotoana any amin'ny tanàna sasany eto amin'izao tontolo izao dia mahatratra haavo mampidi-doza tokoa ho an'ny fahasalaman'ny olona izay miaina ao aminy. Tsy mila mandeha lavitra be isika vao mahita fa ny beret fandotoana ao Madrid mihitsy, izay tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia niaritra ny faharatsian'ny rivotra maloto ary inona ny fameperana hiezahana hampihena ilay rahona fandotoana izay napetraka nefa toa tsy handeha manjavona. Na dia nanampy sy nanamaivana ny lokon'io bereta io aza ireo fepetra ireo sy ny tetezana farany, mandra-pilatsaky ny orana ilaina hanadiovana azy io, angamba tokony hahazoantsika ny fampahalalana avy amin'ny sari-tany voalohan'ny tontolo maloto amin'ny Internet.
Fanombohana frantsay antsoina hoe Plume Labs, manana nandefa tranokala an-tserasera sy fampiharana iray hanolotra ireto angon-drakitra tena lehibe ireto, mba hahafahan'ny mpampiasa mampiasa azy ireo ary hahafantatra ny vinan'ny andro aza. Ity rindrambaiko ity dia Plume Air Report ary misy maimaim-poana avy amin'ny Play Store izy io mba hahafantarany mandritra ny andro raha afaka mivoaka milalao fanatanjahan-tena isika na tsara kokoa ny mijanona ao an-trano noho ny loto be. Fandotoana be izay ahitantsika ireo loto toy ny nitrogen dioxide, sulfur dioxide ary carbon monoxide ary koa ny maro hafa, izay ao an-trano amin'ny rivotra no miaina matetika ireo monina any amin'ny tanàna misy mponina marobe.
1 Mandritra ny fotoana ihaonana an-tampon'ny toetrandro any Paris
2 Fampiharana handraisana fanapahan-kevitra
Mandritra ny fotoana ihaonana an-tampon'ny toetrandro any Paris
Ity sari-tany voalohan'ny fahalotoan'ny rivotra ity dia tonga tamin'ny fotoana nety indrindra izay tanjona kendrena hamehezana ny fiovan'ny toetrandro avy amin'ny firenena maro izay manana fotoana tsy azo ekena ao amin'ny Fihaonana an-tampon'ny toetrandro any Paris.
Ity rindrambaiko ity dia azo alaina avy amin'ny tranonkala, Android sy iOS, hidirana amin'ny tahirin-kevitra momba ny fandotoana avy amin'ny gara 11.000 mahery fanaraha-maso eran'izao tontolo izao. Ankoatry ny fanomezana ireto angona tena lehibe ireto dia manome tombana ihany koa ny haavon'ny fandotoana mandritra ny adiny iray amin'ny tanàna 200 mahery. Izany dia hahafahantsika hahafantatra raha afaka manomana fitsangantsanganana antoandro hanao fanazaran-tena isan'andro isika na tsara raha manome ny tongotra an-tongotra ny zaza amin'ny ora sasany amin'ny andro.
Ny tanjon'ilay fampiharana, raha ny filazan'ny mpanorina azy Romain Lacombe, dia manome data ampy mba hahafahan'ny olona rehetra monina amin'ny tanàna maloto be, manapa-kevitra ny hivoaka na hijanona ao an-trano. Ambonin'izany rehetra izany, toy ny nitranga tao anatin'ny herinandro lasa izay tany Madrid, toerana nitoeran'ny beret nandritra ny andro maro nanolorana panorama, araka ny azonao lazaina, mainty be.
Fampiharana handraisana fanapahan-kevitra
Ny fampiharana no manoro hevitra antsika inona ny hetsika azo atao miankina amin'ny fahalotoan'ny rivotra toy ny:
Mampiaraka ankizy kely
Mihinana ety ivelany
Ny tahirin-kevitra natolotra avy amin'ny sarintanin-kevitra dia mizara ho fanjakana dimy kalitao:
Rivotra madio, ho filamatra ho an'ny hetsika ara-panatanjahantena
Fandotoana antonony, izay misy fahalotoan'ny rivotra ary atoro anao ny vondron'olona sasany hijanona ao an-trano
Mandoto be, rehefa voaloto ny rivotra noho ny fielezana maharitra mety hiteraka olana ara-pahasalamana
Fandotoana avo be, ambaratonga saika mihoampampana izay tena manimba ny vokany na dia ao anatin'ny fotoana fohy monja aza rehefa mivoaka amin'ny arabe ny olona iray
Fandotoana tafahoatra, haavon-tsikera misy fiatraikany ratsy amin'ny karazan'olona rehetra
Ny fampiharana dia mamela ihany koa fidirana amin'ny fandotoana rivotra isan-taona isan-taona misy tanàna maherin'ny 200, izay misy, any amin'ny firenentsika, Madrid sy Barcelona. Tombanana ny kalitaon'ny rivotra sy ny loto maloto toy ny voalaza etsy ambony NO2, SO2, CO sy ny maro hafa.
Ao amin'ny inona ny fampiharana Android mihitsy, manana ny efijery lehibe isika amin'ny metatra kalitaon'ny rivotra ary inona ny haavon'ny fandotoana amin'ny andro ahafahantsika mivezivezy mandritra ny ora maro hahalalantsika azy tsara. Rehefa miova ny kalitaon'ny rivotra dia hiseho amin'ny loko isan-karazany izy ireo, eo amin'ny farany ambany, ireo hetsika samihafa toy ny fanatanjahan-tena sy ny hafa.
Avy amin'ny swipe roa dia afaka miditra amin'ny tontonana ankavia isika manampy tanàna vaovao amin'ny tsoratadidy ary miditra eo no ho eo ny angonao, ary inona no ho mombamomba anao, ahafahanay manova ny fahatsapana ny fahalotoana, ny hetsika ankafizinao ary inona ny fampandrenesana momba ny fanairana maloto.
Una fampiharana tonga lafatra ho an'ireo izay monina amin'ny tanàna lehibe ary amin'izao andro izao dia miatrika fandotoana be izy ireo toy ny mitranga any Madrid. Azonao atao ny mampiasa ny sari-tany fandotoana eran-tany avy amin'ny tranonkala.
Labs plume: fahalotoan'ny rivotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Plume Air Report no fampiharana hahafantarana ny toetry ny fahalotoan'ny rivotra ao an-tanànanao